Inona no fitaovana ahafahana miverin-dàlana tsara indrindra azonao ampiasaina mba hahazoana jiro mifandray tsara?
Mba hahazoana ny vokatra tsara indrindra azo avy amin'ny fampiroboroboana amin'ny aterineto, ny tompon'ilay tranonkala dia tokony hanontany tena ny zavatra tiany hahatratrarana azy. Rehefa manana tanjona ara-barotra manokana ianao, dia ho mora aminao ny hahita ny fomba hanatanterahana izany.
Ny tompon'andraikitry ny orinasa tsirairay izay mandray ny asany dia maniry ny hanao izany tsara. Izany dia midika fa - ny tolotra tsara indrindra sy ny kalitaon-tsara indrindra. Raha manapa-kevitra ny hametraka ny orinasa an-tserasera ianao dia mila manana serivisy azo antoka sy mendri-kaja, votoatim-pahalalàna sy tranokala tsara sy tsara indrindra.
Mila manomboka hatrany am-piandohana ianao raha te ho any amin'ny TOP. Raha manomboka amin'ny scratch ianao, ny zavatra voalohany tokony hamoronana dia ny backlinks ho an'ny tranonkalanao. Hodinihina ato amin'ity lahatsoratra ity izay fitaovana ahafahana mampiasa bakalorea mila ampiasaina mba hahazoana ny tsara indrindra amin'ny rohy eksterna amin'ny tranokalanao.
Ny dingan-dolom-bolo sy ny doka amin'ny fananganana rohy
Voalohany, andeha hodinihintsika ny "don'ts" rehetra tokony hotsarainareo mba hananganana fanentanana fanorenana rohy amin'ny fomba tsara indrindra. Tokony ho azo ampiasaina ihany ianao ary mifandray amin'ny tranokala misy tsenan-tserasanao mba hialana amin'ireo rindran-damina izay mety hanimba ny lazanao eo amin'ny sehatra sy hampisy sazy Google. Raha ny fitsipika, mifamatotra ireo sehatra izay mampifandray votoaty tsy azo antoka ho an'ny loharano ao amin'ny Internet. Izany no antony tokony hikaroka tranokala azo antoka sy azo itokisana. Ohatra, loharanom-baovao toy ny Wikipedia, Forbes, Amazon, Entrepreneur ary ireo sehatra hafa manana fahefana ihany no manana ny laharana avo lenta ary mampitombo azy io koa.
Raha tsy te-hahazo sazy amin'ny milina fikarohana ianao, dia mila misoritra ny rohy izay mety misy ifandraisany amin'ny rindran-damba mainty. Raha ny fitsipika, ireo rohy spammy ireo dia mitovy ny votoatiny, amin'ny endrika samihafa ihany. Mety miteraka fahasamihafan'ny fahasamihafana eo amin'ny tranokalanao izany ary koa ny duplications amin'ny votoatiny.
Mba hananganana fanentanana fananganana rindran-kira, dia mila mampiasa fomba sasantsasany azo antoka mba hahazoana rohy ianao, toy ny:
Azonao atao ny manangana kaonty momba ny raharaham-barotra amin'ny iray amin'ireo sehatra media sosialy malaza toy ny Pinterest, Facebook, Instagram ary ny sisa. Fotoana tsara hampandrosoana ny marikao, manintona ny fifamoivoizana azo avy amin'ny tambajotra sosialy ary manangana backlinks ho an'ny tranokalanao. Ny famoronana fampielezan-tserasera amin'ny haino aman-jery sosialy, mila mifantoka manokana amin'ny olona hanomezanao vaovao ianao. Raha te-hanatsara ny mason'ny marika ianao ary manintona ny mpanjifa mety ho an'ny orinasanao an-tserasera, dia mila mifantoka amin'ny mpihaino miaraka amin'ny tombontsoa mitovy amin'izany ianao mikasika ny vokatrao na ny serivisinao.
Blogging dia fomba iray hafa ahafahana manangana backlinks ho an'ny tranokalanao. Mba hahatratrarana vokatra tsara amin'ity sehatra ity, dia mila manome mpamaky amin'ny votoaty mifototra amin'ny fikarohana izay hanana ny lanjany ho azy ireo. Ny rohy azonao amin'ny alalan'ny bilaogy dia azo aseho amin'ny fomba azonao anaovana izany.
Azonao atao ny mampiroborobo ny fikarohana sasantsasany ampiasaina toy ny vatsim-pianarana tahaka ny s. edu domains dia afaka hitondra anao mpanjifa be dia be ao anatin'ny fotoana fohy dia azonao atao ny manoratra momba ny sasantsasany tsara indrindra ary hampitombo ny lazanao malaza atsy ho atsy Source .